Noloshu waxay noqotaa qurux marka aad barato inaad naftaada u fiicnaato sida aad dadka kale u tahay. - qarsoodi - Quotes Pedia
Is-jacaylku waa shay muhiim ah laakiin badiyaa waan iska indhatirnaa annaga oo ku jirna sii wadidda cilaaqaadyo kala duwan oo nolosha ah. Waxaad dareemeysaa sii wadida cilaaqaadkaas inay muhiim yihiin maxaa yeelay waa kuwa aad ugu jeceshahay uguna daryeesho.
Laakiin waa inaad fahamtaa inaad u baahan tahay inaad is daryeesho naftaada sida aad u daryeesho dadka kale. Qaado waqti aad ku qaadato naftaada kaliya. La xiriir waxa aad runtii jeceshahay oo la falgal. Sii naftaada meel aad ku korto oo aad naftaada ku barto.
Kaliya markaad naftaada jeceshahay, waxaad awoodi doontaa inaad si fiican u jeclaato dadka kale. Micnaheedu maahan inaan mudnaanta koowaad siin doono nafteena. Waxay macnaheedu tahay inaan nafteena ku darno liiska mudnaanta sidoo kale. Waxay u egtahay mid caqli gal ah laakiin waxaan badanaaba ilaabinaa inaan mudnaan siino baahiyaheenna ku dhex jira jahwareerka nolosha.
Noloshu waxay noqon doontaa mid qurux badan markii aad runtii faraxsan tahay. Waxaad ka heli doontaa goobtaada farxadda leh. Waxa kale oo aad ka ogaan kartaa jacayl aadan weligaa aqoon. Naftaada jeclaato asal ahaan macnaheedu waa inaad la xiriirto naftaada dhabta ah.
Markaad naftaada badiso, waxaad bilaabeysaa inaad naftaada jeclaato. Tani waxay kaa farxineysaa waxaadna diyaar u tahay inaad farxadda dadka kale ugu faafiso.
Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in aadan iska iloobin naftaada raadinta inaad qof wanaagsan ku noqoto indhaha dadka kale ama aad daryeesho kuwa jecel. Ku kobci naftaada mudnaanta iyo kuwa kaleba iyo iyo wadajir u koraan si aad ugu noolaatid nolol qurux badan.
Su'aalaha dhiirrigelinta Subaxa Wanaagsan
Maanta waa maalin cajiib ah in la helo maalin cajiib ah. - Qarsoodi
Waqtigu waa qaali oo waxaan u baahan nahay inaan fahamno qiimaheeda dhabta ah. Waxay sugaysaa midna midna sidaa darteedna…
Mar alla markii aad ka jawaabtid dadka taban, noloshaada ayaa sii nabad noqon doonta. - Qarsoodi
Niyad jabku ma aha doorashada oo kaliya; dhab ahaantii waa hab nololeed. Si aan ugu sii fiicnaano, waxaan…
Dadka qaarkiis waa inay iska dhigaan inaad tahay qof xun sidaa darteed ma dareemayaan wax dambi ah wixii ay kugu sameeyeen. - Qarsoodi
Waxaa jira dhowr qof oo dhulka jooga oo leh sawir noocaas oo kale ah oo aan loo eegayn xitaa…